Danjire Maman Sidikou “Shirka IGAD ee Muqdisho wuxuu cadeeyey horumarka ay gaartay Soomaaliya” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya, danjire Maman S. Sidikou ayaa ku tilmaamay shirkii 53-aad ee wasiirada IGAD ay ku yeesheen Muqdisho inuu caddeyn u yahay horumarka amaan iyo kan siyaasadeed ee Soomaaliya gaartay.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska danjire Maman S. Sidikou ayaa lagu sheegay in shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ay shalay ku yeesheen xarunta Soomaaliya ee Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ku yeeshaan tan iyo markii uu dalku galay burburka iyo colaadaha sokeeye.
“Doorka IGAD ee geeddi-socodka nabadda, dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya waa mid horay u sii socda, shikan ay ku yeesheen Muqdisho ku yeesheenna waa mid taariikh ah,” ayuu yiri danjire Sidikou.
danjire Maman S. Sidikou oo sii hadlaya ayaa yiri “Run ahaantii, Somalia waxaa ka jirta nabadgalyo weyn, waxaana taas caddeyn u ah booqashooyinkii ay Muqdisho horay ugu yimaadeen wufuud ka socoota Midowga iyo Qaramada Midoobay iyo weliba booqashadii uu ku yimid xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon. Waana taas midda sababta ay in wasiirrada IGAD ay shirkoodii 53-aad ku yeeshaan halkan.”
Wasiirada Arrimaha Debadda IGAD ayaa shalay Muqdisho ku yeeshay shirkii 53-aad ee aan caadi aheydn, iyadoo shirkaasi ku dhamaaday jawi degan, waxaana madaxweyne Xasan sheegay in shirka madaxeedka IGAD ee March 2015 isna lagu qabanayo Muqdisho.